KBZ Employee Benefit Program – SUNNY eSTORE
SUNNY eSTORE continues to operate to bring you essential supplies to your doorstep
Thadingyut Special: Beauty Week
Midea Big Sale
October Cosmetics Sale
Beko Hot Deal
L'Oreal Paris Promotion
Maybelline New York Promotion
KBZ Employee Benefit Program
ဤKBZ Employee Benefit Programသည် SUNNY eSTORE တွင် ဝယ်ယူသော KBZ ဝန်ထမ်းများအား အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိနိင်‌စေရန် ရည်ရွယ်ထားသော Programတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရယူနိင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
"KBZemployeebenefit" Coupon Codeအား အသုံးပြု၍ SUNNY eSTOREတွင် ၁ရက်နေ့မှ ၂၀ရက်နေ့အတွင်း ဝယ်ယူထားသော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ချက်‌ချင်းငွေပေးချေရန် မလိုအပ်ပါ။ ကျသင့်ငွေအား လကုန်သည့်အခါမှသာ လစာမှဖြတ်တောက်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု Programကိုအသုံးပြု၍ ဈေးဝယ်ယူခြင်းအဆင့်ဆင့်
၁။ www.sunny.com.mm ဝက်ဆိုဒ်သို့ သွားပါ
၂။ မိမိဝယ်ယူလိုသော ပစ္စည်းများအား Cart ထဲသို့ထည့်၍ Check Outလုပ်ပါ
၃။ "KBZemployeebenefit" Coupon Codeအား အသုံးပြု၍ "Apply"ကိုနှိပ်ပါ
၄။ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးရမည့် လိပ်စာအား ထည့်သွင်းပါ
၅။သင့်၏ ကုမ္ပဏီနာမည်နှင့် ဝန်ထမ်း ID နံပါတ်အား Organization နေရာတွင်ထည့်သွင်းပါ။ ဥပမာ KBZ, ID 022666
၆။ Payment လုပ်ရန်ဆက်သွား၍ Payment Optionတွင် KBZPay (with credit)အား ရွေးချယ်ပေးပါ
၇။ Orderအား အပြီးသတ်မှာယူလိုက်ပါ
တစ်လကို အများဆုံး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် ၁သိန်းကျပ်ထိသုံးနိင်ပါသည်။
KBZ Bankတွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းဖြစ်ရမည်။
Coupon codeဖြစ်သည့် "KBZemployeebenefit" အား အသုံးပြုထားရမည်။
လစဉ်လတိုင်း ၁ရက်နေ့မှ ၂၀ရက်နေ့အထိ ဝယ်ယူနိင်ပါသည်။ ၂၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်း၍ Coupon codeမှာ အသုံးပြု၍ရနိင်မည်မဟုတ်ပါ။
The KBZ Employee Benefit Program isaprogram designed to extend KBZ employees withacouple of benefits for the purchases made on SUNNY eSTORE. The benefits are as followed.
1) 5% discount on all Food & Drinks products
2) Shop NOW, Pay LATER !! KBZ employees who use the coupon code
"KBZemployeebenefit" can purchase any item from SUNNY eSTORE would not need to make immediate payments for their purchases made between 1st to 20th of every month. Their total purchase value will be deducted from their payroll only when the month ends.
How to make purchases using this program
1) Visit www.sunny.com.mm
2) Put all the items you want to purchase to "carte" and go to check out
3) Use the coupon code "KBZemployee Benefit" and click "Apply"
4) Fill in your shipping address
5) Type your organization name and employee ID in the "Organization" field. Example, KBZ, ID 022666.
6) Proceed to payment and select "KBZPay (with credit)" as payment option
7) Complete the order
a) Maximum Credit limit of MMK 100,000 per person per month
b) Must beacurrent employee of KBZ
c) Must use coupon code "KBZemployeebenefit"
d) Orders can be made only between 1st and 20th of every month. The code will not be active from 21st to month end
KBZPay QR Code